iMovie: Download aro iMovie Plugins
Na-atụ aro iMovie Plugins & Bara Uru Ngwaọrụ
iMovie enyere Mac ọrụ dezie vidiyo na isi ngwá ọrụ na atụmatụ. Ma na enyemaka nke dị iche iche iMovie plugins na ndị ọzọ na ngwaọrụ, ihe ọkaibe video edezi ihe aga-eme nwere ike ime. Ebe a na-atụ aro 10 iMovie nkwụnye ins ga-eme ka gị iMovie ahụmahụ ọzọ afọ ojuju na fun.
DownloadHelper bụ a free na bara uru Firefox ndọtị maka nbudata na converting vidiyo si na ọtụtụ ndị na saịtị n'ime nkeji. Ọ na-enye gị mfe nnweta dị ọdịnaya na a ga-ebudatara site nchọgharị gị, nke mere na ị pụrụ ime ka ojiji nke ọdịnaya gị iMovie oru ngo.
Mụta ihe banyere DownloadHelper >>
Filp4Mac bụ a mfe ma dị irè ngwọta bụrụ na ị chọrọ na-egwu WMV ma ọ bụ WMA faịlụ gị Mac. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike tọghata na mbupụ WMV video maka iMovie enweghị eke àgwà etisa H.264 faịlụ. Kama nke ahụ, a ala AIC (Apple Intermediate Codec) faịlụ na-kere iMovie zere ọzọ transcoding mgbe importing.
Mụta ihe banyere Filp4Mac >>
piStabilize pụrụ inyere gị aka belata n'ikwe na vibrations nke video okpokolo agba site smoothing ngwa ngwa ngagharị Elezie a ẹkenam site n'aka-ẹkenịmde ese foto. Ọ na-eji a smart ike mbugharị Usoro iji hụ na mbugharị bụ naanị etinyere ebe ọ dị mkpa.
Mụta ihe banyere piStabilize >>
# 4. GreeThree nkwafu
GreeThree nkwafu enye ndị kasị ewu ewu iMovie plugins. Ọ nwere ọtụtụ olu dị, onye ọ bụla na a collection nke mmetụta, ikwu n'ụzọ na ndị ọzọ na ndị ọzọ atụmatụ maka gị iMovie, gụnyere multi-igwefoto edezi, preset mixes, isi etiti njikwa na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere GreeThree nkwafu >>
iBubble enye 13 ụdị dị iche iche maka iMovie. Ọ na-agụnye a collection okwu egosipụta, echiche egosipụta, kpọọ, kpọọ na-agbapụ akụ, na ederede na pụrụ iche utịp. Ọ na-nwere ya graphic ọrụ interface ebe gị utu aha ebe ị chọrọ ha.
Mụta ihe banyere iBubble >>
MPEG Streamclip bụ a free ma dị ike video Ntụgharị, ọkpụkpọ, nchịkọta akụkọ nke MPEG, QuickTime, iga iyi na iPod. Ị nwere ike iji ya iji tọghata video ma ọ bụ ọbụna DVD iche iche formats ọ bụrụ na gị media faịlụ ndị dakọtara na iMovie.
Mụta ihe banyere MPEG Streamclip >>
Audacity bụ a ma ama free oghe isi dijitalụ audio edekọ na nchịkọta akụkọ. Na ya, ị nwere ike dee ma kpọọ azụ ụda, edit site ịkpụ, idetuo na mado (na-akparaghị ókè etoju nke Wepu), wepụ ndabere mkpọtụ na na. Ọ bụ nnọọ uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ dezie gị audio faịlụ n'ihu importing ya iMovie
Mụta ihe banyere Audacity >>
iStopMotion bụ ihe dị mfe na-eji ngwá ọrụ maka nkwụsị ngagharị-aga aga na oge lapse ndekọ. Ọ na-elekwasị anya na perfects nkà nke akada otu okpokolo agba. Mgbe ị na ndekọ na-aga aga, dị nnọọ mbupụ iMovie dezie, tinye utu aha na nsonaazụ ụda.
Mụta ihe banyere iStopMotion >>
# 9. Ọkụ
Apa ọkụ bụ ihe dị mfe ma bara uru CD na DVD burner maka Mac. Ọ na-enyere gị aka ọkụ gị faịlụ ka a diski mere na ị nwere ike ịnweta ha e mesịrị na. I nwekwara ike ịgbanwe ụfọdụ elu ntọala dị ka, faịlụ ikikere, diski icon, faịlụ ụbọchị na ndị ọzọ na ada na na Burns soja.
Video Space ga gbakọọ ego ole ohere gị dị footage ga-. I nwekwara ike gbakọọ oge ohere ma ọ bụ ohere oge dị ka e gosiri site ntụziaka nke akụ n'etiti abụọ ọsọ ọsọ ebe. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ uru mgbe ị mechaa a oru ngo.
Mụta ihe banyere Video Space >>
> Resource> iMovie> iMovie:-atụ aro iMovie Plugins & Bara Uru Ngwaọrụ